Qatar Airways oo bixinaysa 100-kun oo tikidh lacag la’aan ah – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Qatar Airways oo bixinaysa 100-kun oo tikidh lacag la’aan ah
Shirkadda diyaaradaha ee Qatar Airways ayaa markii ugu horeeysay shaaca ka qaaday inay bixinayso boqol kun oo tikidh lacag la’aan ah, kuwaas oo lagu tagi karo dhamaan magaalooyinka ku kala yaalla daafaha caalamka.
Tikidhadaasi ayaa ah kuwa la siin doonno oo kaliya dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee haatan dagaalka xoogan kula jira cudurka safmarka ah ee COVID-19.
Shirkadda Qatar Airways ayaa arrintaasi ku macneysay inay tahay mid loogu abaal marinayo shaqaalaha caafimaadka ee safka hore kaga jira la dagaalanka cudurka COVID-19 iyo badbaadinta dadka uu cudurku soo ritay.
Ugu dambeyntii shikadda ayaa shaacisay in xilliga dalbashada tikidhadaasi ay ku egtahay 18-ka bishaan aynu ku jirno ee MAY.
Si kastaba ha ahaatee, shirkadda Qatar Airways ayaa haatan duulimaadyo kala duwan ku sameeysa illaa 30 magaalo oo ku kala yaalla caalamka, balse waxaa dhammaadka bisha soo socota ee June la filayaa inay tiradaasi kasii kororto.